Izici ezi-12 Ezithinta Isu Lakho Le-imeyili Lamazwe Ngamazwe | Martech Zone
Izici ezi-12 ezithinta isu lakho le-imeyili lomhlaba jikelele
ULwesibili, April 12, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Sisize amaklayenti nge amazwe omhlaba (I18N) futhi, ukubeka nje, akumnandi. Ama-nuances we ukufaka ikhodi, ukuhumusha nokwenza okwasendaweni kwenze inqubo eyinkimbinkimbi.
Uma kwenziwe kabi, kungaba amahloni ngendlela exakile… ingasaphathwa eyokungasebenzi. Kepha ama-70% wabasebenzisi be-inthanethi abayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-2.3 akusizona izikhulumi zesiNgisi zomdabu futhi yonke imali engu- $ 1 esetshenziswe ekwenzeni indawo itholakale ine-ROI engu- $ 25, ngakho-ke isisusa sikhona sokuthi ibhizinisi lakho liye kwamanye amazwe uma kungenzeka.
Izindela ze-imeyili zihlanganise i-infographic on uya emhlabeni wonke nge-imeyili yakho yokumaketha Isu elihlinzeka ngezinto eziyi-12 ezinomthelela empumelelweni yokumaketha kwakho kwe-imeyili.
Ukucatshangelwa Kwezilimi Nokukopisha - yenza ucwaningo lwakho lwezilimi eziningi ukugwema amagama angathinta ukuhanjiswa.
Ukukhetha Abahumushi - akwanele ukuqonda ukuthi uhumusha kanjani, izinsizakusebenza zakho zokuhumusha kufanele zikuqonde nokuqukethwe.
Thumela i-imeyili ngobuhle - ukwakheka kwe-imeyili yakho kufanele kwamukeleke ngokwamasiko kulabo obabhekele.
Inqubo Management - kusuka ekwakhiweni nasekuhumusheni kuze kufike ekubikeni, kufanele ukwazi ukukala kalula umthelela wemizamo yakho esifundeni.
Ukufomatha Umlayezo Nesakhiwo - I-RTL (Kwesokudla kuye Kwesobunxele) noma izilimi ezinesisekelo sendawo zingadinga ukwakheka okuhle neqembu ngalinye.
Isu Lokuqala Lamaselula - uma ungowamazwe omhlaba jikelele, kungenzeka ukuthi ungoweselula! Kungcono ulungiselelwe amafasitela amancane nezindawo zokubuka.
Izinhlaka Ezisemthethweni - qiniseka ukuthi uwena ehambisana nemithetho yezwe ngalinye ukuqinisekisa ukuthi awwephuli noma imiphi imithetho futhi ungakhulisa ukulethwa ngabahlinzeki Besevisi Yasekhaya ye-inthanethi
Ukwenza okuthandwa nguwe - Ukuthola ama-imeyili aphesheya kukhulisa ngokuningiliziwe ubuwena ongabenza ukwandisa ukuvuleka, ukuchofoza nokuguqulwa.
Ukubizelwa Esenzweni - Ungadluli kwizimangalo zakho njengoba uzama ukuthola ababhalisile ukuthi bachofoze, amanye amazwe anemithetho eqinile ekukhangiseni nasekukhuthazeni.
uhlelo lwezikhathi - Isikhathi sonyaka, amaholide wesifunda, kanye namashejuli womsebenzi konke kungathinta amazinga akho avulekile nokuchofoza.
Ukuphathwa kwedatha nohlu - Gcina izinhlu zakho zisebenza futhi zintsha, uqinisekisa ukuhlukaniswa kwamakhono nokuhlunga ngesifunda kunemininingwane.
PESTLELE - imele ezombusazwe, ezomnotho, ezenhlalo, ezobuchwepheshe, ezomthetho nezemvelo. Yiba nomuzwa ngomthelela wasendaweni wokuthumela imiyalezo yakho ngalezi zindlela zombono.
Nayi yonke i-infographic, hlola ifayela le- okufushane exhumana at imeyili Izindela.
Tags: ulimiukufaka ikhodi nge-imeyilii-imeyili infographicukwenziwa kwamazwe ngamazwe nge-imeyiliukwenziwa kwamazwe ngamazwe nge-imeyiliukwenziwa kwe-imeyiliukwenziwa kwe-imeyiliizindela ze-imeyiliizindela ze-imeyili infographicukuhumusha nge-imeyiliUkufaka ikhodiukuhumusha komuntuukuhumusha ngomshinipestlekwesokudla kwesokunxelertlizinhlaka zogaxekileukuhumushayini ipestle
Izindlela Ezingama-20 Zokuthola Izinga Lokuqukethwe Kwakho Lingcono Kunembangi Yakho
I-Wipster: Ukubuyekezwa Kwevidiyo Nesikhulumi Sokugunyazwa